» चौतर्फी घेराबन्दीले सिटमा दोस्रो देखिए पनि समग्रमा एमालेको जनमत बढेको छ: नेम्बाङ
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार १७:५२ प्रकाशित
अघिल्लो निर्वाचनमा पहिलो भएको नेकपा एमाले यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनका कारण मात्रै नेपाली कांग्रेस पहिलो हुन पुगेको तर्क गर्ने एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ तमाम घेराबन्दीका कारण पनि एमाले दोस्रो स्थानमा रहन सक्नुलाई पार्टीको विजयका रूपमा लिन्छन् । उनै नेम्बाङसँग निर्वाचन, निर्वाचनको परिणामलगायत विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सिट धेरै गुमिसक्यो, अब जनमत छ भनेर चित्त बुझाई रहनुभएको छ ?
सत्तारूढ दलले त स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेर प्रतिगमनलाई पराजित गर्‍यौँ भनिरहेका छन् नि ?
योभन्दा केही अरू देख्नुहुन्छ । त्यसपछि यो पनि बिर्सन हुन्न कि ओलीजीले गरेको संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्नेहरू आफैं पुनः विघटन गर्न नलागेका होइनन् र ? स्थानीय तह निर्वाचन सारेर सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि नगरेका होइनन् र ? के संसद् विघटन नगरी सङ्घीय संसद्को ‘अर्ली इलेक्सन’ हुनसक्थ्यो र ? त्यसैले संसद् विघटनको प्रस्ताव त सर्वोच्चको परमादेशबाट पछि पनि सत्तारूढ दलबाट आएको हो । हामीले बरु त्यसको ठाडो प्रतिवाद गर्‍यौँ, कि संसद् विघटन गरे ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने सत्तारूढ दलको चाहनालाई अवरोध गरेर मुलुकलाई स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ होमायौँ । त्यसैले उनीहरूले गरे प्रतिगमन नहुने र अग्रमन हुुने अनि हामीले गरेर प्रतिगमन हुने ? यो त राजनीतिक खपतका लागि बोलिएको विषय मात्रै हो । यसमा कुनै तुक छैन ।
सबैतिर पराजय भोगेपछि एमालेले वाम गठबन्धनको कुरा गर्न सुरु गर्‍यो भनिन्छ नि ?